Ihe mgbakwunye ọhụrụ na nkwalite na Apple | Esi m mac
Mgbanwe na-eduga na nduzi Apple na Jeff Williams ghọrọ onye ntụzi ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ
Apple ekwuputala ụfọdụ mgbanwe na ndị isi oche ya na-akwalite Jeff Williams, onye bụbu onye isi oche ndị isi nke arụmọrụ, dị ka Chief Operator Officer na Johny Srouhi na-akpọ ya ka ọ sonyere Apple dị ka Onye isi oche ndị isi nke Teknụzụ Akụrụngwa.
N'aka nke ya, Phil Schiller a ma ama, onye isi osote onye isi ahịa ahịa ụwa, ga-agbakwunye na ọtụtụ ọrụ ya nke nnọchite nke ụdị ahụ, ọrụ nke njikwa nke Storelọ Ahịa App na nyiwe Apple niile. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Tor Myhren, onye bụbu Chief Creative Officer nke ụlọ ọrụ Gray, ga-esonyere Apple na nkeji iri na ise nke afọ 2016 dị ka onye isi oche nke Marketing Communications na-akọrọ Tim Cook.
N'ebe a, Tim Cook kwuru, sị:
Anyị nwere ihu ọma inwe omimi dị omimi na ịdị omimi nke talent gafee ndị isi otu Apple. Ka anyị na-eru nso na njedebe nke afọ, anyị na-achọpụta ọtụtụ onyinye ndị isi abụọ na-arụ ọrụ na Apple […] Jeff bụ ihe kacha mma COO anyị na-arụkọ ọrụ na ndị otu Johny na-enye atụmatụ ụlọ ọrụ ụwa nke na-enye anyị ohere imepụta ihe ọhụrụ na ngwaahịa anyị n’afọ ọ bụla.
Tụkwasị na nke a, Phil na-eburu ibu ọrụ ọhụrụ maka ọganihu nke usoro okike anyị site na iduzi Storelọ Ahịa App, nke si na ịbụ ụlọ ahịa pụrụ iche na nke ọhụrụ na-agbasawanye na nyiwe anọ dị ike nke na-adịwanye mkpa na azụmahịa anyị. Obi dị m ezigbo ụtọ ịnabata Tor Myhren, onye ga-ewetara ikike okike ya na ọrụ mgbasa ozi na ahịa anyị.
Jeff sonyeere Apple na 1998 dị ka Isi nke Nweta Worldwide na 2004 a kpọrọ ya Onye isi oche nke Ọrụ. Kemgbe 2010, ọ na-ahụ maka ngwa ọrụ, ọrụ na nkwado Apple niile, yana ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-echebe ihe karịrị otu nde ndị ọrụ gburugburu ụwa. Jeff keere òkè bụ isi na ntinye Apple n'ime ahịa ekwentị mkpanaaka na mwepụta nke iPhone, ọ gara n'ihu na-elekọta mmepe nke mbụ wearable Apple, Apple Watch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Mgbanwe na-eduga na nduzi Apple na Jeff Williams ghọrọ onye ntụzi ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ
Echere m na ha ewepụlarị Cook
New 'The Sims 2: Pet Stories' na Mac App Store
Nkeji 60 'na - ebipụta onyonyo nke ụlọ nyocha nzuzo nke Apple na Twitter